चुनावको मुखमा नयाँ आइजिपी नियुक्त गर्दै देउवा, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
चुनावको मुखमा नयाँ आइजिपी नियुक्त गर्दै देउवा, को हुन् उनि ?
काठमाडौँ। चुनावको मुखैमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको नेतृत्व फेरिँदा सुरक्षा प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। देउवाले थाहै नदिए भित्रा -भित्रै तयारी थालेको श्रोतले बतायो। चुनावलाई लक्षित गरि देउवाले आफु निकटलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गर्ने छन्।
थय यो बिषयलाई लियर फेरि शिर्ष नेताहरुला फेरि तनाव उतपन्न हुन् सक्ने नाम नबताउने शर्तमा एक नेता जानकारी दिए। स्थानीय निर्वाचनअघि दुवै प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन हुँदै छ।
चुनावको मुखैमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको नेतृत्व फेरिँदा सुरक्षा प्रभावित हुने सम्भावना छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले चुनावको १२ दिनअघि अवकाश पाउँदै छन्।
३० वर्षे सेवाहदका कारण उनले १८ वैशाखमा अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन्। जसकारण चुनावको वेला नयाँ आइजिपीले सुरक्षा कमान्ड सम्हाल्नुपर्नेछ।
सामान्यतः सुरक्षा निकायमा प्रमुखले एक महिनाअघि बिदा बसेर भावी प्रमुखलाई कायममुकायम दिएर नेतृत्वमा परिपक्व बनाउने प्रचलन हुन्छ। तर, प्रहरीको महानिरीक्षक बढुवामा हुने अत्यधिक चलखेलले सरकारले अघिल्लो दिन मात्र बढुवा गर्दै आएको छ।
जसले बढुवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय दिन्छ। चुनावको मुखमा यसरी उच्च प्रहरी अधिकारीहरू बढुवाको दौडधुपमा लाग्दा त्यसको नकारात्मक असर सुरक्षामा देखिन सक्ने पूर्वप्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
सशस्त्र प्रहरी बलमा त यसबीचमा दुई आइजिपी फेरिनेछन्। हालका आइजिपीका शैलेन्द्र खनालले २८ चैतमा अवकाश पाउँदै छन्। आइजिपीको चारवर्षे पदावधि पूरा गरी उनले अवकाश पाउन लागेका हुन् । खनालको अवकाशपछि उनकै ब्याचका एआइजीले २१ दिनका लागि संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउनेछन्।
जसको प्रतिस्पर्धामा एआइजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल छन्। उनीहरूले ३० वर्षे सेवाहदका कारण १८ वैशाखमा अवकाश पाएपछि अहिलेको डिआइजीमध्येबाट एक आइजिपी हुनेछन्।
जसमा राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम दाबेदार छन्। २८ वैशाखपछि रिक्त हुने एआइजी पदमा बढुवा गरी लगत्तै एकलाई आइजिपी बनाउनुपर्ने हुन्छ। सशस्त्र प्रहरीको इतिहासमा अहिलेसम्म १ नम्बरमा रहेका एआइजी नै महानिरीक्षक हुँदै आएका छन्।
नेपाल प्रहरीमा गत महिना थपिएको एआइजीको तीन पदमा बढुवा सिफारिस भएको छ। डिआइजीहरू वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकको नाम बढुवा समितिले सिफारिस गरेको हो।
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको हो। थपिएको तीन पदमा १८ जना डिआइजीबीच प्रतिस्पर्धा थियो ।बढुवा सिफारिस भएकामध्ये पन्तले आगामी १८ वैशाखमा अवकाश पाउँदै छन्।
एआइजीमा बढुवा भएसँगै सिंह र धानुक भने प्रहरीको भावी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। यसअघि उनीहरूकै ब्याचबाट विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा एआइजी भइसकेका छन्।
उनीहरूलाई पनि दरबन्दी थपेर नै यसअघि बढुवा गरिएको थियो। एआइजी बढुवामा फेरि पनि सिनियर डिआइजीहरू छुटेका छन्। हालका डिआइजीमध्ये घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्की सबैभन्दा सिनियर थिए। दुवैजना बढुवामा छुटेका छन्।
३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एक लाख म्यादीमा भर्ना खुलेको छ। नेपाल प्रहरीले ११ चैतभित्र दरखास्त दिन आह्वान गरेको हो। साधारण लेखपढ गर्न सक्ने १८ वर्षदेखि ५४ वर्षका व्यक्तिले दरखास्त दिन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ।
तोकिएको ४० दिनमा म्यादीले ३० हजार दुई सय ४० रुपैयाँ तलब, सात हजार दुई सय रासन खर्च र ६ हजार पोसाकबापत खर्च पाउँछन् । हजार रुपैयाँ यातायात खर्च पनि दिइने नेपाल प्रहरीको सूचनामा उल्लेख छ।
सुरक्षा निकायको भर्नामा दरखास्त दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका तथा अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई म्यादीका लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै, विदेशी सुरक्षा निकायमा काम गरी अवकाश पाएका तथा अघिल्लो निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा भर्ना भई सन्तोषजनक काम गरेका व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको हो।
कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका तथा फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएका अयोग्य हुने प्रहरीले जनाएको छ। २२ चैतसम्म नतिजा प्रकाशन तथा २८ चैतदेखि तालिम सुरु गरेर वैशाखको पहिलो सातादेखि ड्युटीमा खटाइने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले बताए।
एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा एक लाख १८ हजार म्यादी चाहिने विश्लेषण भए पनि अर्थले एक लाखका लागि मात्र बजेट दिएपछि प्रहरीले त्यसैअनुसार दरखास्त मागेको हो।